Cunaqabateyno noocee ah ayay Kenya kusoo rogi kartaa Soomaaliya? | Saxil News Network
Image captionXiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa meeshii ugu xumeyd gaaray sabtidii lasoo dhaafay
Waxaa maalin kahor ay dowladda Kenya si cad u sheegtay in aysan Soomaaliya marnaba gacanta u galin doonin xitaa qeyb yar oo ka mid ah dhulka ay ku fadhiso xuduudda badda ee ay ku muransan yihiin.
Kenya ayaa dalbatay in Soomaaliya ay sharraxaad buuxda ka bixiso qodobada ay Kenya taabatay ee ku saabsan meelaha shidaalka qaniga ku ah ee la “beeciyay”.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Monica Juma ayaa hoosta ka xariiqday in ay jiri karto cunaqabateyn ay ku soo rogaan Soomaaliya, taasoo ku xiran hadba sida ay noqoto jawaabta ay xukuumadda Muqdisho ka bixiso sharraxaadda laga sugayo.
Waxaa haddaba la isweydiinayaa waxa ay noqon karaan cunaqabateynadaasi?
Dad ku xeeldheer xiriirka caalamiga ayaa BBC-da u sheegay in cunaqabateynada caalamka ay yihiin labo nooc oo kala ah mid golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay uu ku soo rogo dal ama shakhsiyaad, dalalka kale ee caalamkuna ay ku qasban yihiin inay dhaqan geliyaan, halka cunqabateynta kalena ay tahay mid dal uu kusoo rogo dal kale marka uu xiriirkooda xumaado, dalalka kalena ee caalamka iyo hay’daha caalamiguna aysan ku qasbaneyn inay dhaqan galiyaan.
Dalka Kenya oo Soomaali badan ay siyaabo kala duwan ugu nool yihiin ayaa dadkaasi waxaa kamid ah ganacsato heysta basaboor Soomaaliga, siyaasiyiinta Soomaalida ee kenya yimaada, qoysaskooduna ay degan yihiin, arday wax ka barta jaamacadaha Kenya iyo qaxooti Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga iyo magaalooyinka waaweyn ee Kenya.
“Kenya haddii ay tallaabdaasi qaado waxay cunaqbateyn ku soo rogi kartaa siyaasiyiin ay kamid yihiin xildhibaanada iyo madaxda dalka Soomaaliya iyo ganaacsatadii dhaqalaha wadanka Kenya soo geliyay, marka labadaa dhinac unbay cunaqabateyn saari kartaa Kenya”. Waxaa sidaasi BBC-da u sheegay Ciid Badal oo ah diblomaasi hore.
Ciid ayaa intaa raaciyay in taasi aysan ka dhigneyn cunaqabteyn caalami ah, balse siyaasiyiinta iyo ganacsatada ay u wareegi karaan dalal kale oo gobolka.
Image captionMadaxda dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku kulmay Nairobi
Inkastoo qaxooti badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dalka Kenya ayaa haddana waxaa la aaminsan yahay in si qasab ah aanan loogu celin karin Soomaaliya, maadaama Kenya ay kamid tahay dalalkii saxiixay heshiiskii caalamiga ee dhowrayay xuquuqda qaxootiga ee Geneva 1951 Refugee convention.
Khasaaraha maaliyadeed ee ka dhalan kara cunaqabateynadaasi
Waa mid iska cad in xurguf walba oo soo kala dhexgasha dalal deris ah laga dhexli karo dhibaatooyin ay kamid tahay dhaqaale xumi, hasayeeshee Kenya oo dakhli badan uu ka soo galo Jaadka ama Qaadka ay kenya geyso ayaa haddii ay ku dhawaaqdo cunaqabateyn ka dhan ah Soomaaliya waxaa la aaminsan yahay in saameyn dhaqaale ay kasoo gaari karto, maadaama ay aad u yar tahay waxyaabaha Soomaaliya ay u dhoofiso Kenya.
“Dakhliga ugu badan oo Kenya ay geyso Soomaaliya Jaadka kamid ah, haddii cunaqabateyn ay soo rogto, Soomaaliya jaadka way joojineysaa, halkaana lacag badan oo faaida ah ayay Kenya ku weyneysaa; sidoo kale shaqo abuurkii xagga Jaadka ayaa meesha ka baxaya, marka cunaqabateynta Kenya iyada ku khasaareyso”. Ayuu raaciyay Ciid Badal.
Wuxuu intaa raaciyay in haddii Kenya ay qaado tallaaba ay ku cunqabateeneyso Soomaaliya, ay dowladda federaalka ku khasbanaaneyso in hay’adihii caalamiga, safaardihii reer galbeedka ee fadhigoodu ahaa Nairobi ay usoo wareegaan gudaha Soomaaliya, maadaama aysan boooqan karin, taaso oo uu Ciid Badal sheegay in khasaare kale ay ku tahay Kenya.
Kenya ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeesay in London ay ku “xaraashtay” dhul ay sheegtay inay leedahay, waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ay markale ku nuuxnuuxsatay in hadal waafi ah ay ka sugayaan Soomaaliya.